नेपालीहरुलाई प्राय लाग्ने रोग ग्यास्ट्रिक किन र के कारणले लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन प्रमुख कारण – सुदूरखबर डटकम
नेपालीहरुलाई प्राय लाग्ने रोग ग्यास्ट्रिक किन र के कारणले लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन प्रमुख कारण
पेटमा हुने एसिडले खाना पचाउनेदेखि खानामा आएका बाहिरी ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्दछ । तर पेटमा हुने अम्लीय पदार्थको उत्पादन बढी भएमा त्यसले तन्तुलाई जलाउने गर्दछ जसलाई साधारण भाषामा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक हुँदा पेट फुल्ने, ढ्याउ आउने, पेट भारी हुने, खाना नपच्ने, बान्ता हुने वा पेट दुख्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । लामो समयसम्म खाना नखाँदा पनि ग्यास्ट्रिक भई पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने लगायतका समस्याहरु हुने गर्दछन् । जसका कारणले पाचन प्रकियामा असर पु¥याँउछ र शरीरमा रगत र क्याल्सियमको कमी गराउन सक्छ ।
लामो समयसम्म ग्यास्ट्रिक हुदा कालान्तरमा अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म हुनसक्छ ।